အခြားထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပေးသွင်းသူများ - China Others Factory
စက်မှု 200L-1000L ထောပတ်မွှေစက် ထောပတ်မွှေစက် Butter Churner ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် ဤထောပတ်စက်သည် အစားအသောက်လုပ်ငန်း၏ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဖရိန်နှင့် တိုင်ကီကိုယ်ထည်၏ ပစ္စည်းသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသော သံမဏိ SUS304 ကို အသုံးပြုထားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းမှုရလဒ်၊ လည်ပတ်မှုစရိတ်သက်သာ၊ ပိုကျယ်သည်။ အသုံးပြုမှုအကွာအဝေးစသည်တို့။ Cone ဆလင်ဒါကို ဒရမ်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဆီပက်ခြင်း၏ရလဒ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ထိရောက်မှုလည်း မြင့်မားပါသည်။အာရုံစူးစိုက်မှုအောက်တွင် နို့များသည် ဒရမ်နံရံပတ်ပတ်လည်တွင် စုဝေးနေလိမ့်မည်...။
ဆန်ကြိတ်စက် အခွံခွာစက် အသစ် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဆင်ပြေသော နှစ်ထပ်အလွှာ သဲဖယ်ရှားရေး ကျောက်ဆန်ကြိတ်စက်
ဆန်ကြိတ်စက် အခွံခွာစက် အသစ် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော နှစ်ထပ်အလွှာ သဲဖယ်ရှားရေး ကျောက်ဆန်ကြိတ်စက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ- သဲဖယ်ရှားခြင်း၊ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ အခွံခွာခြင်း၊ အမှုန့်အဖျင်းများနှင့် အသားဖြူစေခြင်း အားသာချက် 1. မြန်ဆန်သော မြန်နှုန်းထက် 1-4 မိနစ် ပိုမြန်သည် ဆန်ကောင်ရေ တစ်ရာလျှင် အလားတူထုတ်ကုန်များ၊2. စက်ကိရိယာများသည် လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်၊3. သက်တောင့်သက်သာရှိသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ၊ အစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲထုတ်နိုင်ပြီး သီးခြားစီ တပ်ဆင်နိုင်သည်။၄...။
ကော်ပတ်တံဆိပ်တပ်သည့်စက် ပုလင်းအဝိုင်း ပုလင်းစွပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက် အသုံးချမှုနယ်ပယ်- ၎င်းသည် ပုလင်းဝိုင်း၊ ပုလင်းပြားများ၊ စတုရန်းပုလင်းများ၊ အကွေးပုလင်းများ၊ ခွက်များနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များတွင် အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ နေ့စဉ် ဓာတုဗေဒနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များအတွက် သင့်လျော်သော ဘက်စုံသုံး အလိုအလျောက် လက်စွပ်တံဆိပ်ကပ်သည့်စက်ဖြစ်သည်။ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်း။နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်- ပါဝါ (kw): 2.0 ဗို့အား (v): 220v AC ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်း (b/min): 150—300 အသုံးပြုနိုင်သော ပုလင်းအချင်း အကွာအဝေး (mm): Φ38—Φ120 အသုံးပြုနိုင်သော တံဆိပ်အလျား (mm): 3...
Cooling Tower နှင့် Cooling Machine Oil Type Screw Chiller
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသော Cooling Tower အအေးခံစက် ဆီအမျိုးအစား Screw Chiller MODEL (m³H) FLOW TOWER DIMENSION (MM) FAN DIAMETER (kw) MOTOR DRY WET DIAMETER (H)HEIGHT RX-10 7.8 930 1740 64835 90. 15 11.7 1070 1630 635 0.37-6P 545 0.37-60 0.550 0.550 0.55-60 0.55-60 0.55-60 970 0.55-60 0.75-60 0.75-60 0.75-60 96 500 RX-30 23.4 1666 530 RX-40 21.2 1660 2050 930 1.50-6P 130 550 RX-50 39.2 1880 2250 930 1.50-6P 190...
သင့်စက်ရုံအတွက် ဘီယာချက်စက်ရုံအတွက် အစုံအလင် တပ်ဆင်ပါ။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း- စော်ဖောက်ခြင်း စက်ပစ္စည်းအခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်: JP-BM0012 လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ- အရက်ဗို့အား: 380V ပါဝါ: 15-70Kw အတိုင်းအတာ(L*W*H) ပေါ်မူတည်၍ စွမ်းဆောင်ရည် အလေးချိန်တောင်းဆိုမှု- 1-3T အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO အာမခံချက်- 1 Year After-sales Service Provided- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ရရှိနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ ပစ္စည်း- Stainless Steel 304 Function- Brewing Beer Br...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း- စော်ဖောက်ခြင်း စက်ပစ္စည်းအခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်: JPF-WM0012 ဆောင်ရွက်မှုအမျိုးအစားများ- ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာ ဗို့အား- 3phase/380(220 ပါဝါ- 15-70Kw အတိုင်းအတာ(L*W) ပေါ်မူတည်ပါသည်။ *H): စွမ်းရည်တောင်းဆိုမှု အလေးချိန်- 200KG-2000KG အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO9001 အာမခံ- 1 Year After-sales Service Provided- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ရရှိနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ ပစ္စည်း- SUS 304 စွန်းထင်း...
စျေးအကောင်းဆုံး ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ ရေငွေ့ပျံ စုစည်းမှု
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMP မော်ဒယ်နံပါတ်: JPML-1127 အမျိုးအစား- စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းလိုင်း ဗို့အား: 220V/380V ပါဝါ: 2.2kw အလေးချိန်: 2t Dimension(L*W*H): 1380* 1200*2000mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE ISO အာမခံချက်- 1 နှစ် အရောင်းအပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ရရှိနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ ထုတ်ကုန်အမည်- ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ ရေငွေ့ပျံ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်- 500kg-100T/H ပစ္စည်း: SUS304 လုပ်ဆောင်ချက်-...
CBD ထုတ်ယူခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းစက်
အမြန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ မူရင်းနေရာ- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- ခုန်တက် လျှောက်လွှာ- ထုတ်ယူခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း အင်္ဂါရပ်များ- တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော အခြေအနေ- အသစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု စွမ်းရည်- 220v အာမခံ-2နှစ် Dimension(L*W*H): 5000*2200*3500mm ပါဝါ- 35kw အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများ၊ အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု၊ ပြည်ပဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင် ရရှိနိုင်သော ဗို့အား- 220v အသုံးပြုနိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်း- ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာစက်ရုံ၊ လယ်ယာ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ Reta...
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Reverse Osmosis RO ရေသန့်စင်စနစ်စက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် မူရင်းနေရာ- တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Jumpfruits ပစ္စည်း: ကာဗွန်ဇကာ၊ Stainless Steel 304 အလေးချိန်: 1T အရွယ်အစား: စွမ်းရည်ပေါ်မူတည်၍ ပါဝါ: 4kw အရောင်းအပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်မှု၊ ခန့်အပ်မှုနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အာမခံ- 1 နှစ် အသုံးပြုမှု- ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း Sourse Water: မြစ်၊ နွေဦး၊ ရေကန်၊ တွင်းပေါက်၊ ရေချိုဖြစ်နိုင်သည် အင်္ဂါရပ်- 100% စက်ရုံနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစမ်းသပ်ပြီး ထုတ်ကုန်အမည်- Reverse Osmosis ရေ t...
ပြောင်းအညှာကောက်ရိတ်စက် ဂျုံပဲပုပ် ချည်ကြံမြက် Forage Harvester ကိုယ်တိုင်တွန်းကန်ထွန်စက် စိုက်ပျိုးရေးစက်
Multifunctional Corn Stalk Harvester ဂျုံပဲပုပ် ချည်ကြံမြက် Forage Harvester Self-propelled Tractor စိုက်ပျိုးရေးစက် ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၎င်းသည် ပြောင်းဖူးနှင့်ပတ်သက်သည့် အစိမ်းရောင်သိုလှောင်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မြင့်မား၍ကြမ်းသောပြောင်းဖူးရိုးတံများကို ခုတ်ထစ်ဖျက်စီးနိုင်သည်။ပြောင်းဖူးရိုးတံသည် ဖျော်ရည်ကြွယ်ဝသည်။ကြိတ်ချေသည့်ကိရိယာသည် အာဟာရဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချရန် မြင့်မားသောနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။၎င်းသည် မွေးမြူရေးတောင်သူအများစုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိမ်းရောင်အစာချက်သည့်စက်ဖြစ်သည်။စိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်...
ဆလင်ဒါ လေးဘီးတပ် အသေးစား ပြောင်းရိတ်ကိရိယာ သုံးတန်း ပြောင်းဖူးရိတ်စက် ရောင်းရန်ရှိသည်။
စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် ဆလင်ဒါ လေးဘီးတပ် အသေးစား ပြောင်းရိတ်စက် လေးတန်းပြောင်း ရိတ်သိမ်းခြင်း ကုန်ပစ္စည်း ဖော်ပြချက် ကောက်ရိတ်စက်တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် အစားအစာထည့်သည့်သေတ္တာ ပါရှိပြီး စပါးအစာထရပ်ကားထဲသို့ ချောမွေ့စွာ လောင်းထည့်နိုင်စေရန်အတွက် စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုတစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မူလကောက်ရိုးစုဆောင်းသူ၏အခြေခံဖြင့် ဆင့်ပွားဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကောက်ရိုးကို အလိုအလျောက် ထပ်မံချေမှုန်းရန်အတွက် ကောက်ရိုးကို ထပ်မံချေမှုန်းရန် ဆင့်ပွားကြိတ်စက်ကို ပေါင်းထည့်ကာ ကောက်ရိုးမှုန့်ကို ပိုမိုနေရာယူလာစေသည်။ချိန်ညှိရန် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါကိုလည်း သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
လုပ်ငန်းသုံးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် semi-automatic ဖုန်စုပ်စက်ကို စက်ရုံစျေးနှုန်းဖြင့်
စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော Semi-automatic Vacuum Capping Machine သည် လုပ်ငန်းသုံးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် semi-automatic vacuum capping machine ကို semi-automatic double-station reciprocating vacuum capping machine ဟုလည်းခေါ်သည်၊၊ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ငရုတ်သီးဆော့စ်ကို ဖုန်စုပ်ခြင်းအတွက် လည်းကောင်း၊ အခြားဆော့စ်များ။semi-automatic vacuum capping machine တွင် ဖုန်စုပ်ဗူးများနှင့် ဆော့စ်များ အပါအဝင် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာ ပါရှိပါသည်။ထို့အပြင် Semi-Auto ၏ ထူးခြားချက်များမှာ ...